Settawya စေတီတော် | မြန်မာသွားရောက်ကြည့်ရှု
← ဧရာ Chinthe ခြင်္သေ့
အပေါ် Posted 04/11/2017 အားဖြင့် ပရာဘွမ်% @နိုဝင်ဘာလ 4, 2017
Settawya စေတီတော်, ထို့အပြင် Sat Taw Yar စေတီတော်ဟုခေါ်တွင်, အကြားတစ်နေရာရာတည်ဆောက်ခဲ့ 1804 နှင့် 1811. ဒါဟာနောက်ကျောချဧရာဝတီမြစ်အပေါင်းတို့သည်လမ်း၏အဓိကလမ်းကနေသွားသည့်အလတ်စားချစ်စရာကောင်းတဲ့အဖြူရောင်ဗိမာနျတျောဖြစ်ပါသည်.
သငျသညျအဓိကဗိမာနျတျောအခနျးအတှငျးရှိကိုကြည့်ပါလျှင်သင်သည်ဗုဒ္ဓ၏ထိုစကျင်ကျောက်ထွင်းထုခြေရာကြမ်းပြင်တစ်ဦးထမြောက်တော်မူ Dias အပေါ်သတ်မှတ်ထားတှေ့လိမျ့မညျ. အပြင်မှာ, နောက်ဘက်ကျန်ကြွင်းသောအရပ်ကနေ, သငျသညျမြစ်ဖို့ခြေလှမ်းတွေကိုဆင်းသွားနိုင်ပါတယ်.
မြစ်ဆင်းဦးဆောင်သည့်ခြေလှမ်းများမြစ်အစွန်းမှာနှစ်ခုကြီးမားသော leogryph ခြင်္သေ့မှာအဆုံးသတ်ထွင်းထုကိန်းဂဏန်းများလေးတန်းစီပြီ. ငါသေးများကိုသိသိသာသာ၏သေချာမဖြစ်ကြောင်းကိုသင်မူကား, လက်ဝဲဘက်ရုပ်ပွားတော်၏နှစ်ခုအတန်းကိုကြည့်နှင့်လက်ျာပျေါတှငျနှစျခုတန်းစီဖို့သူတို့ကိုနှိုင်းယှဉ်လျှင်သင် thay မြင်ရပါလိမ့်မည်သူတို့ရဲ့ရင်ဘတ်မှထမြောက်တော်မူကွဲပြားခြားနားသောလက်တို့သည်ရှိ. အဆိုပါစင်တာကိုအတန်းပြင်တန်းများအကြားတစ်ဦးသေးငယ်လှေကားနှင့်အတူပိုမိုကျယ်ပြန် staiway အဘို့ဖြစ်စေခြင်းငှါ. အာရှတိုက်မှာတခြားနေရာကိုတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဖြစ်ဖြစ်နိုင်သည်သံဃာတော်များနှင့် Royal ဗဟိုလှေကားနှင့်လူတို့သညျကိုသုံးပါနှင့်အမျိုးသမီးပြင်လှေကားခွဲခြားအသုံးပြု.
အဆိုပါဒီရေကိုသင်၌ရှိ၏လျှင်တော်ဝင်တွဲရေယာဉ်ကိုအလွယ်တကူသွားရန်လှေကား၏အောက်ခြေတွင် moored နိုင်နှင့်တော်ဝင်ပါတီပေါ်ကဆင်းခွင့်ပေးလိုက်တယ့်ဗိမာနျတျောဖို့ခြေလှမ်းတက်သှားပွီနိုင်ပုံကိုစိတ်ကူးနိုင်ပါတယ်.
Sat Taw Yar စေတီတော်ကနေလမ်းလျှောက်အကြောင်းကို 100 ထပ်မံလမ်းပေါ်မှာတက်နှင့်သင့်ညာဘက်အပေါ်ဧရာမခြင်္သေ့တွေဟာ.
Posted in, မင်းကွန်း	permalink
မင်းကွန်း Pahtodawgyi စေတီတော်
ဧရာ Chinthe ခြင်္သေ့